Mialoha sy aorian’ny fety…: hanao hetsika goavana ny polisy ka mampitandrina - ewa.mg
Mialoha sy aorian’ny fety…: hanao hetsika goavana ny polisy ka mampitandrina
News - Mialoha sy aorian’ny fety…: hanao hetsika goavana ny polisy ka mampitandrina
« commissariat central », ny kaomisera Rakotovao Jean
Christian, nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly
tao Toamasina, fa hanao hetsika goavana ny eo anivon’ny
Polisim-pirenena mialoha sy aorian’ny fankalazana ny faran’ny taona
sy ny fandraisana ny taom-baovao ho an’ny ao Toamasina manokana ka
mampitandrina izy ireo. « Haparitaka araka izay azo atao
amin’ireny toerana misy hetsika fandraisana lanonana sy fety
isan-karazany ary faritra be olona, toy ny fiangonana, ireny ny
Polisim-pirenena manao fanamiana sy manao fanamiana sivily
hiarovana ny fananana sy ny aina », hoy izy. Nohamafisiny fa
hitandro ny filaminana sy ny fandriampahalemana ny Polisim-pirenena
hahafahan’ny vahoaka mianoka milamina anatin’ny fety. « Na
izany aza, aoka tsy hofoanana olona kosa ny isan-tokantrano tsy
hisian’ny fakam-panahin’ireo jiolahy », hoy ireo kaomisera
telo lahy niatrika ny mpanao gazety. Nampitandrina ireo minia mbola
hanakorontana sy hanao asa ratsy ireto manamboninahitra ireto ary
« raha mikasa hanohitra ny mpitandro filaminana dia hitifitra
avy hatrany izahay”, araka ny fanazavan’ny kaomandin’ny Fip, ny
kaomisera Rafaliarivo Jules.
Fa voasambotry ny polisy tao Tsarakofafa i Clément, jiolahy
fanta-daza amin’ny fanafihana mitam-piadiana ao Toamasina. Basy
vita gasy iray tratra tany aminy.
L’article Mialoha sy aorian’ny fety…: hanao hetsika goavana ny polisy ka mampitandrina a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 31/12/2020
Kitra: mpilalao dimy vaovao hosedraina ao amin’ny Barea
Efa ao anatin’ny fanomanantena amin’izao fotoana izao ny Barea de Madagascar. Ankoatra ny fiofanana atrehina, hisy koa fihaonana firahalahiana hatrehin’izy ireo. Amin’izany no hitsapana ireo mpilalao vao nantsoina.Efa any Luxembourg avokoa ny ankamaroan’ireo mpilalaon’ny Barea de Madagascar, nanomboka, omaly talata, nantsoin’i Nicolas Dupuis hiatrika ny fampivondronana sy ny fiofanana. Tsy niandry ela fa niatrika avy hatrany ny fanazarantena ry zalahy ka ny famerenana tsikelikely ny tanjaka ny vatana aloha ny nanombohana izany, tao amin’ny kianja Hesperange.Misy mpilalao dimy vaovao hosedraina ao amin’ny Barea de Madagascar, mandritra ity fampivondronana ity, ireo vodilaharana, i Sylvio Ouassiero, avy amin’ny CS Fola Esch Luxembourg, sy i Bakary Mario, FC Fleury 91 Frantsa. Eo koa i Hery Bastien, irakiraka mpanafika avy amin’ny Linfield ary ireo lohalaharana roa lahy, i Hakim Abdallah, avy amin’ny FC Swift Hesperange, sy Ramalingom Alexandre, CS Sedan Ardennes, Frantsa.Marihina fa mpilalao 20 amin’ireo 25 nantsoina no hany afaka amin’ity fanomanantenan’ny Barea de Madagascar ity.Tsiahivina fa mpilalao tompon-toerana dimy tsy afaka miatrika izao fanazarantena izao: i Abel Anicet sy i Mombris, tsy salama. I Amada Ibrahim sy i Carolus ary i Romain Metanire, tsy misy sidina.Tafiditra ao anatin’izao fanomanantenan’ny Barea izao ireo lalao firahalahiana roa hidonana amin’ny FC Swift Hesperange Luxembourg, ny zoma 9 oktobra ho avy izao, ary ny fihaonana amin’ny Etalons-n’i Côte d’Ivoire, ny alatsinainy 12 oktobra, any Maraoka. Hiomanana amin’ny fikatrohana amin’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire eo amin’ny fifanintsanana ho an’ny “Can 2022” izany rehetra izany.Lalao mandroso, hatao any Abidjan ny 9 novambra ho avy izao ary ny 17 novambra ny fihaonana miverina, any amin’ny kianja Barikadimy Toamasina, araka ny fangatahan’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar. TompondakaL’article Kitra: mpilalao dimy vaovao hosedraina ao amin’ny Barea a été récupéré chez Newsmada.
Antananarivo Kely – Mantasoa: nanatsatoka zana-kazo 510 ny vehivavy mpanao gazety
Niova kely tamin’ny hetsika mahazatra ny notanterahinan’ny vehivavy mpanao gazety ny faran’ny herinandro teo.Namboly zana-kazo fihinamboa sy karazany hafa mahatratra 510 ny fikambanan’ny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara (FJM), ny faran’ny herinandro lasa teo any amin’ny kaominina Mantasoa, distrikan’i Manjakandriana. “Nosafidina manokana ny hanatanterahana fambolen-kazo any Antananarivo Kely satria misy olona manara-maso tsy tapaka ny zana-kazo natsatoka ary voakarakara”, hoy ny filohan’ny fikambanana, Andrianaivonirina Anny. Tsy mianona fotsiny amin’ny fizarana fahaiza-manao sy ny fiofanana amin’ny lohahevitra maro ny vehivavy mpanao gazety fa manana andraikitra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana satria olom-pirenena ihany koa. Ampahany amin’ireo mpikambana no nifamotoana teny Mantasoa izay toerana mahasarika mpizahatany rahateo rehefa faran’ny herinandro. Nanohana ny hetsika nahafahana niroso amin’ny fambolen-kazo ny orinasa Star, ny SMMC any Toamasina ary ny Unicef mpiara-miombona antoka hatramin’izay amin’ny fikambanana. Niara-dalana tamin’ny vehivavy mpanao gazety teny an-toerana namita ny adidy koa ny fikambanan’ny mpitsabo eny anivon’ny minisitera samihafa ary ny INLA mpiaro ny tontolo iainana.Ho an’ny fanamarihana ny Andron’ny vehivavy ny 8 marsa ho avy izao, manomana hetsika roa ny fikambanan’ny vehivavy mpanao gazety malagasy eto an-dRenivohitra mandritra ny tontolo andro. Manana mpikambana 500 ny fikambanana manerana ny Nosy.Vonjy A.L’article Antananarivo Kely – Mantasoa: nanatsatoka zana-kazo 510 ny vehivavy mpanao gazety a été récupéré chez Newsmada.
Fakana an-keriny mpirahalahy: olona telo hafa mbola karohina
Taorian’ny fahatrarana ireo jiolahy fito mianadahy tetsy Ampasika-Itaosy, ny 28 ka hatramin’ny 30 okotobra lasa teo. Jiolahy telo hafa, mpiray tsikombakomba amin’ireo efa voasambotra no mbola karohin’ny zandary, ankehitriny. Hatreto, tsy mbola nahazoam-baovao ny momba ilay ankizilahikely 11 taona. Mbola tazomin’ireo jiolahy karohina ihany koa izy.Araka ny fanadihadiana, misy fianakavian’ireo mpirahalahy nalaina an-keriny avy ao Ambatomanoina-Anjozorobe ireo jiolahy voasambotra, vehivavy ny iray amin’ireo olon-dratsy. Ireto farany, izay tratra taorian’ny antso nifanaovan’izy ireo. Sarona tany amin’ireo mpaka an-keriny ny basy lava nampiasainy sy ny ambim-bola mitentina 3.600.000Ar nalaina tamin’ireo ray aman-drenin’ireo mpirahalahy.Tsiahivina fa nisy naka an-keriny ny harivan’ny 23 oktobra teo ireo mpirahalahy mpiandry omby. Ny ampitson’io, nahazo antso tamin’ireo jiolahy ireo ray aman-dren’izy roa lahy ka nitaky vola mitentina 7Tapitrisa Ar ho tambin’ny famotsorana an’izy miarahalahy. « Efa nandoa ny antsasaky ny vola ireo fianakaviana ka nalefa tamin’ny Mvola izany, saingy tsy navotsotr’ireo jiolahy izy roa lahy», hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray. Ny 27 oktobra teo anefa, hita faty tao amin’ny fokontany Ambodirano, Amparihibe, kaomininaHenintsoa Hani L’article Fakana an-keriny mpirahalahy: olona telo hafa mbola karohina a été récupéré chez Newsmada.
Schémas d’aménagement communaux : Formation des responsables techniques dans la région Sofia
Un Outil de base pour la planification territoriale. C’est ainsi que le Schéma d’Aménagement Communal (SAC) est considéré, dans l’optique du développement dans les milieux ruraux, pour les 15 ans à venir. Selon la Direction générale de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement, au sein du MATP (Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics), la Région Sofia figure parmi les régions sélectionnées par le programme de réduction de gaz à effet de serre « Atiala Atsinanana », pour bénéficier de cet outil. Dans ce cadre, un atelier de formation sur l’élaboration du SAC a été organisé le 12 août dernier, au bénéfice des responsables techniques au niveau des deux communes sélectionnées. L’événement s’est tenu dans la Commune Urbaine d’Antsohihy, District d’Antsohihy dans la Région Sofia. Deux Communes de la Région en sont les bénéficiaires à savoir Ambilombe et Belalona. Il s’agit donc d’un fruit d’une collaboration entre le MATP et le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable à travers le programme REDD+. Durant l’atelier les deux communes concernées ont présenté leur engagement dans l’élaboration et la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement Communal et dans la mise en place du Comité Régional de l’Aménagement du Territoire (CRAT). Selon ses initiateurs, cette action entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réduction d’émission de gaz à effet de serre « Atiala Atsinanana » dans les régions Alaotra Mangoro, Atsinanana, Analanjirofo, Sofia et Sava. Antsa R.L’article Schémas d’aménagement communaux : Formation des responsables techniques dans la région Sofia a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Firongatry ny Covid-19 …: eto Analamanga ny 165 amin’ireo tranga 238
Dimy ny trangana fahafatesana vokatry ny Covid-19 ny alatsinainy 3 mey teo raha ny tatitry ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Nidina tampoka ny salanisa raha mbola nahatratra 11 izany, iray andro talohan’io.Etsy andaniny, 286 ny olona nahitana ny trangan’aretna vaovao amin’ireo 973 nanaovana fitiliana. Eto Analamangana avokoa ny 165 amin’ireo tranga vaovao ireo. Mbola misy olona 308 miady amin’ny fahafatesana satria marary mafy sy sempotra tsaboina eny amin’ireo hopitaly sy ny CTC ireny. Mahatratra 3 733 kosa ireo marary hafa manaraka fitsaboana sy arahi-maso akaiky ny fivoaran’ny fahasalamany.Tetsy andaniny, nisy ny sitrana soa aman-tsara miisa 422 ary afaka aretina ka teto Alamananga ny 335 amin’ireo raha tany Vakinankaratra ny 37.Tatiana AL’article Firongatry ny Covid-19 …: eto Analamanga ny 165 amin’ireo tranga 238 a été récupéré chez Newsmada.
Na andro io na volana… : ny toe-tsaina mihitsy no mila ovaina
… “Fetin’ny mpifankatia”, “Andro eran-tany ho an’ny…”, “Andro iraisam-pirenena natokana ho an’ ny…”, “Iray volan’ny teny ma­lagasy”, sns. Tsy misy vo­lana ka tsy ahitana andro ma­rihina na ankalazaina. Ni­tondra nankaiza izy ireny? Tsara ny mahatsiahy, saingy raha tsiahy tsy hoenti-mampandroso, tsy ilain’ny firenena. Tsara ny ezaka ataon’ireo mpam­pahatsiahy, saingy mandeha ila ihany izany raha ny tazana tao anatin’ny taona maromaro izay. Ny toe-tsain’ny Malagasy mihitsy no mila ovaina. Mani­nona no mandritra ny “Volan’ ny teny malagasy” vao miezaka hiteny malagasy madiorano? Izany ve tsy kisarintsarin’ady anaty fihatsarambelatsihy? Mila iainana ny teny ma­lagasy fa tsy iandrasana ny vo­lana jona hatrany vao mba ho­men-kasina, “hono”. An­koatra ny Malagasy tsirairay, ny isan-tsehatra mihitsy no mila miaina ny teny malagasy. Manomboka tafiditra ao anatin’ny fiainan’ny Malaga­sy ny fisehosehoana sy ny renty ivelany. Raha tsy dradradradraina etsy sy eroa, na any amin’ny haino-vayi-jery ve fa mila miteny malagasy madio ny Malaga­sy tompony, tsy hanaiky izany ny saina? Misy aza moa Mala­gasy sasany te hiseho fa tsy mampiasa loatra ny teny ma­lagasy, “hono”, eo amin’ny fiainany andavanandro ka “mba manao ezaka amin’ity volana jona ity hiteny malagasy ranoiray”. Miteny amin’ny tenindrazana ve dia mila hanaovana ezaka be manakory? Ilay toe-tsaina no mila ha­naovana ezaka hanaiky fa “izay tompon’ny teny, tompon’ny tany”!HaRy RazafindrakotoL’article Na andro io na volana… : ny toe-tsaina mihitsy no mila ovaina a été récupéré chez Newsmada.
Judo – Afrika: Atleta 200 no hifananinana
Hanomboka anio etsy amin’ny Lapan’ny Tanora sy Fanatanjahantena Mahamasina, ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika sokajy seniors, eo amin’ny taranja Judo. Atleta 200 avy amin’ny firenena 32 no handray anjara amin’izany ka 125 lehilahy, 75 vehivavy. Ho an’i Madagasikara manokana, miisa 16 no judokas handray anjara, ka ananana solontena avokoa ny sokajy rehetra. Nohamafisin’ny filohan’ny federasiona malagasy, Siteny Randrianasoloniaiko, sambany betsaka ny firenena handray anjara amin’ity andiany faha-41 ity. Nitondra fisaorana manokana ny fitondrana ihany koa ny tenany, izay tena nanampy tamin’ny fanatanterahana ity hetsika ity. Ny filoha lefitry ny UAJ, Mohammed Meridja, ihany koa dia nisaotra ny firenena malagasy, naneho fahavononana tamin’ny fandraisana ity fifaninanana ity, ary mendrika hatao maodely.Mi.RazL’article Judo – Afrika: Atleta 200 no hifananinana a été récupéré chez Newsmada.
Ao anatin’ny famolavolana ny tetikasa fitaterana mihantona an-tariby na “transport par câble” ny kaominina Antananarivo renivohitra (KAR) sy ny minisiteran’ny Fitaterana, Fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro. Nampahafantarin’ny kaominina ny fanombohan’ny asa goavana sy pitsopitsony amin’ny fametrahana an’ireo fotodrafitrasa hifamoivoizan’ ny fitaovam-pitaterana na «Teleferika» amin’ny fiandohan’ny volana jona ho avy izao. Hialohavan’ny fanadihadihana momba ny tontolo iainana sy ny sosialy ireo rehetra ireo. “Vita ny fanadihadiana rehetra. Ny orinasa Poma, izay hamatsy ny fitaovana, no miara-miasa amin’ny orinasa Colas. Ny orinasa Biotope kosa no misahana ny fanadihadiana ara-tontolo iainana. Raha afaka iray volana no hanomboka ny tena asa rehetra”, hoy Rasamoelimihamina Niry, talen’ny fanajariana ny tanàn-dehibe ao amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra. Fakàna tany Fantatra fa tsy hisy fandravana fotodrafitrasa efa miorina akory amin’ireo toerana handalovan’ny zotra, izany hoe ny mampitohy an’Anosy sy Ambanidia ary Anosy sy Ambatobe. Fakana tany ilaina noho ny tombontsoa iombonana kosa no hatao miaraka amin’izao tetikasan’ny fitaterana mihantona an-tariby izao. Tsiahivina fa nisy ny fiantsoana ireo lehiben’ny fokontany amin’ny faritra voakasik’ity tetikasa ity teto an-drenivohitra, niarahana tamin’ny minisitra Randriamandranto Joel sy ny Ben’ny tanàna Andriantsitohaina Naina, afak’omaly. Tombanana hifarana any amin’ny volana jona 2023 ny asa rehetra sy hahafahana mitrandraka an’ity fitaovampitaterana vaovao eto an-drenivohitra ity. L’article Fitaterana mihantona an-tariby :: Hanomboka amin’ny jona ny asa fametrahana ny teleferika est apparu en premier sur AoRaha.